Duqaymo cusub ayaa lagu qaaday caasimadda Tigray ee Mekelle - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Duqaymo cusub ayaa lagu qaaday caasimadda Tigray ee Mekelle
Duqaymo cusub ayaa lagu qaaday caasimadda Tigray ee Mekelle
Milateriga Itoobiya ayaa duqeyn cusub ku qaaday caasimadda Tigreega ee Mekele, duqeyntii labaad ayaa toddobaadkan lala beegsaday bartilmaameedyada Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega ee magaalada.
Duulaanka ayaa muujinaya korodh xoog leh oo ku yimid colaad muddo ku dhow hal sano ka taagnayd woqooyiga Itoobiya oo ay iskaga hor imanayaan ciidamada dawladda iyo xulafadooda oo ka soo horjeeda TPLF, oo ahayd xisbiga talada haya ee Tigray-ga.
Afhayeen u hadlay dowladda ayaa xaqiijiyay duqayntii ugu dambeeysay.
“Waxaa bartilmaameed laga dhigtay xarumihii ay TPLF u beddeshay dhismeyaasha hub iyo dayactir ay ka dhigatay,” ayuu Legesse Tulu, madaxa Adeegga Isgaadhsiinta Dowladdu, u sheegay AFP isagoo u diray farriin qoraaleed.
Illaa iyo hadda lama oga haddii ay jiraan khasaare nafeed oo ka dhashay duqaynta, oo ay sheegeen kooxda TPLF iyo sidoo kale hay’adaha bani’aadamnimada iyo diblomaasiyiinta iyo qof isna deegaanka kasoo jeedaa.
“Waxay ahayd mid culus oo diyaaraddu aad bay ugu dhaweyd,” ayuu yidhi qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay AFP, isagoo intaas ku daray inay burburisay goob warshadeed oo ku taalla magaalada.
“Waxay gubtay dhammaan xaruntii. Ma garan karno khasaaraha ka dhashay laakiin hadda shirkadda oo dhan ayaa gubatay oo dambas noqotay.”
Xukuumadda ra’iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa u muuqata inay cadaadis ku heyso guluf cusub oo ka dhan ah kooxda TPLF oo muddo ku dhow sodon sano haysay siyaasadda qaranka ka hor inta uusan xukunka la wareegin 2018.
Colaadda ayaa horay u dishay dad aan tiradooda la qiyaasi karin waxayna dhalisay dhibaato bani’aadanimo oo qoto dheer, iyadoo Qaramada Midoobay ay sheegtay in ilaa laba milyan oo qof ay barokaceen boqolaal kunna ay galeen xaalado macluul u eg.
Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa sheegay in weerka Arbacada lagu bartilmaameedsaday xaafad ku taal Mekele “taasoo sababtay dhaawac soo gaadhay dad rayid ah iyo waxyeello hantiyeed”.
“Falcelinta Abiy ee ku aaddan khasaaraha ka soo gaadhay dagaallada socda waa in lagu beegsado dadka rayidka ah boqolaal kms oo ka fog goobta dagaalka,” ayuu ku yidhi Twitter-kiisa.
Isniintii, ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa laba weerar ku qaaday Mekele, oo ah magaalada ay haystaan ​​kooxda TPLF tan iyo markii laga qabsaday ciidammada dawladda bishii June.
Qaramada Midoobay ayaa Talaadadii sheegtay in weeraradaas ay ku dhinteen saddex carruur ah, kuna dhaawacmeen sagaal qof.
“Xoojinta colaaddu waa mid laga naxo,” ayuu yidhi Jens Laerke, oo ah afhayeenka Xafiiska Xidhiidhinta Arrimaha Bani’aadamnimada ee Qaramada Midoobay (OCHA).
“Waxaan mar kale xusuusineynaa dhammaan dhinacyada sida uu qabo sharciga caalamiga ah ee bani’aadamnimada si loo ilaaliyo rayidka iyo kaabayaasha rayidka.”
Afhayeenka xukuumadda ayaa markii hore beeniyay wararka ku saabsan duqeymaha cirka ee Isniintii isagoo ku tilmaamay “been cad” laakiin warbaahinta dowladda ayaa markii dambe xaqiijisay in milateriga ay garaaceen warbaahinta iyo bartilmaameedyada isgaadhsiinta ee TPLF.
Colaadda ayaa markii ugu horreysay billaabatay bishii Nofembar ee la soo dhaafay ka dib markii Abiy oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize uu ciidamo u diray Tigray si ay meesha uga saaraan kooxda TPLF.
Wuxuu sheegay in talaabadani ay jawaab u tahay weeraradii TPLF ku qaaday xeryaha ciidanka federaalka wuxuuna balan qaaday guul degdeg ah.
Laakiin dabayaaqadii bishii June TPLF ayaa dib isu soo abaabushay oo dib ula wareegtay inta badan gobolka oo ay ku jirto Mekele, iyada oo si aad ah u soo rogaal-celisay.
Tan iyo markaas, jabhadu waxay koonfurta ka riixeen ciidamada waxayna galeen gobollada deriska la ah ee Amxaarada iyo Canfarta. QM ayaa maanta sheegtay in ilaa toddoba milyan oo qof oo ku nool saddexda gobol ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto iyo taageero kale oo degdeg ah.
Previous articleQorshaha dib-u-habeynta Facebook, waxaa ku jira magac cusub
Next articleKoonfur Afrika waxaa laga helay kayd weyn oo Helium ah